Waddamada saboolka ah ayaa diiday tallaallada COVID-19 ee bilaashka ah ee ay bixiso Qaramada Midoobay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Waddamada saboolka ah ayaa diiday tallaallada COVID-19 ee bilaashka ah ee ay bixiso Qaramada Midoobay
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Waddamada saboolka ah ayaa dhowr arrimood ka haysta qaadashada tallaallada loogu deeqay. Kuwo badan ayaa ka maqan awoodda kaydinta si ay u helaan shixnadaha waxayna dhibaatooyin kala kulmaan fidinta ololayaasha tallaalka sababo la xiriira sida xasillooni-darrada gudaha iyo kaabayaasha daryeelka caafimaadka oo ciriiri ah.
Etleva Kadilli, oo ah madaxa qaybta saadka ee UNICEF, oo ah hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan horumarinta nolosha carruurta adduunka oo dhan, ayaa u sheegtay. Baarlamaanka Yurub in barnaamijka COVAX, oo loogu talagalay in lagu caawiyo waddammada faqiirka ah si ay dadkooda uga tallaalaan coronavirus, ay dhibaato ku jirto, maadaama tabarucaad badan oo tallaal ah ay haystaan ​​nolol shelf oo hadhay oo aad u gaaban oo aan si habboon loo qaybin.
Bishii hore oo keliya, in ka badan 100 milyan oo qiyaasood ayaa la siiyay UNBarnaamijka COVAX waa in ay diidaan dadka gargaarka qaata, badidood waxaa sabab u ah taariikhaha dhicitaanka tallaalka oo soo socda.
Hay'adda ayaa isla maalintaas sheegtay in ilaa 15.5 milyan oo ka mid ah qiyaasihii la diiday bishii hore la sheegay in la burburiyay. Qaar ka mid ah shixnadaha waxaa diiday dalal badan.
Laakiin taariikhaha gaaban ee tallaallada loogu deeqay barnaamijka wadaagga ayaa sidoo kale ah dhibaato weyn, Kadilli ayaa u sheegay EU xildhibaanada.
"Ilaa aan ka helayno nolol shelf wanaagsan, tani waxay noqon doontaa meel cadaadis ah dalalka, gaar ahaan marka waddamadu rabaan inay gaaraan dadka ku nool meelaha ay adagtahay in la gaaro," ayay tiri.
COVAX waxay hadda ku soo dhawaanaysaa gaarsiinta qiyaasteeda bilyane, maamulkeeda ayaa sheegay. The EU waxay ka dhigan tahay saddex meelood meel qiyaasaha la siiyay ilaa hadda, Kadilli ayaa yidhi.
The Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), oo wada maamusha COVAX, ayaa marar badan ku tilmaantay caawimada liidata ee ay ka hesho deeq bixiyayaasha iyada oo lagu jiro kaydinta tallaalada ee ay wadaan wadamada qaniga ah inay tahay guuldarro damiir.
Qaar ka mid ah 92 dal oo xubnaha ka ah ayaa seegay hadafkii WHO ee 40% ee tallaalka 2021 "sababo la xiriira isku darka saadka xaddidan ee aadi jiray waddamada dakhligoodu hooseeyo sanadka intiisa badan ka dibna tallaallada xiga oo u soo dhowaanaya inay dhacaan oo aan lahayn qaybo muhiim ah - sida silingaha," WHO Agaasimaha Guud Tedros Ghebreyesus ayaa sheegay intii lagu guda jiray shirkii dhamaadka sanadka ee Diseembar.
Qaar ka mid ah dhaleeceeyayaasha ayaa sheegaya in barnaamijka uu ahaa mid khaldan bilowgiisii ​​sababtoo ah wuxuu ku tiirsan yahay deeqsinimada dadka hodanka ah halkii ay ku riixi lahaayeen helitaanka ballaaran ee tallaalada wadamada soo koraya iyada oo loo marayo ciribtirka caqabadaha sharciga ah sida ilaalinta patentka. Billioneer Bill Gates, oo ah shaqsi saameyn ku leh daryeelka caafimaadka adduunka, wuxuu si cad uga soo horjeeday ka qaadista ilaalinta patent-ka ee dawooyinka, in kasta oo aasaaskiisu uu u muuqday inuu ku tiirsan yahay tallaallada COVID-19 ka dib markii uu la kulmay dhaleeceyn ku saabsan booska.
Janaayo 14, 2022 markay tahay 23:57
Si kastaba ha ahaatee is tallaal. Way kuu fiican tahay